Spears & Munsil UHD HDR Benchmark (UHD Blu-ray Disc) - MediaLight Bias Mwenje
musha Spears & Munsil UHD HDR Benchmark (UHD Blu-ray Disc)
Save $0.00 Save $ -39.95
Mutengo wepakutanga $39.95 - Mutengo wepakutanga $39.95
Mutengo wanhasi $39.95
Ndokumbirawo kuti muverenge iyo yepamhepo Mushandisi Gwaro kuti udzidze maitiro ekugadzirisa kuratidzwa kwako nePfumo & Munsil UHD HDR Benchmark.
Kunyangwe iwe uri imba cinema anofarira kana nyanzvi calibrator, iwe unowana iyo yese bvunzo iwe yaunoda kuti umise uye kugadzirisa yako HDR kuratidza mu Spears uye Munsil UHD HDR Benchmark.
Editions dzakapfuura dzeiyo HD Benchmark dzakakurudzirwa neNew York Times, Home Theatre Magazine, Widescreen Ongororo, uye akawanda emamwe anodhindwa uye epamhepo zvinyorwa. Ichi chitsva chinyorwa chine ese-nyowani mapatani akagadziridzwa akakwirira akasimba renji, yakafara ruvara gamut uye Ultra HD resolution
Zvinhu zvinokosha zvinosanganisira:
MaCalibration mapatani kubatsira kuseta maratidziro ekujekesa kwakanyanya
Kuongorora mapatani ekufamba, kupinza, kuenderana kwemavara uye zvimwe
Yekutanga yekuratidzira zvinhu yakapera mu8K HDR
Zviratidzo zvekuratidzira zvakapihwa muHDR uye SDR yekuongorora
Yakakura sarudzo yemapatani ehunyanzvi calibrator
Maitiro ese eHDR anowanikwa mu600, 1000, 2000, 4000 uye 10000 cd / m² shanduro
Iyo Spears uye Munsil UHD HDR Benchmark ndiyo yakanyatsojeka uye yakazara HDR bvunzo disc inowanikwa chero kupi. Yese pateni yakasikwa ichishandisa yedu yakasarudzika yepamusoro-yepamusoro chaiyo maturusi esoftware uye inomiririra iyo mamiriro ehunyanzvi muvhidhiyo kubereka.
Spears & Munsil UHD HDR Benchmark haisanganise mafirita ebhuruu kubva kunguva yeSDR yechinhu chiri nyore icho mafirita ebhuruu haashande pane kuratidzwa kweHDR. Shandisa iyo bhuruu-firita / bhuruu-chete maitiro ayo anopihwa pane kumwe kuratidzwa, kana shandisa chaiyo mareferenzi zvinhu kuti uone color
zvose zvinyorwa zvinowanikwa online chete uye zvinogona kusiyana nekuratidzira. Shanyira iyo S & M webhusaiti nguva nenguva kuti utarise akagadziridzwa magwaro evashandisi.
Kunyange paine akawanda mapatani anoshandiswa nevatengi, dhisiki iri zvakare rinosanganisira akawanda emamwe mapatani ehunyanzvi ayo anoda chiridzwa. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti izvi ndizvo zvamunoda musati maodha.
Kunyange ma disc akavhurwa asingadzoreke, akaremara kana akaora disc anogona kuchinjaniswa.
4.6 Kubva pane 17 Ongororo
Kwete Vhidhiyo Yakakosha
Kwete mirairo disc. Ini ndashandisa Vhidhiyo Zvakakosha kubvira pakutanga. Ndine OPPO 4K uye ndanga ndichivimba kuti zvingave zvinonyanya kubatsira, asi zvinoita sezvakanyanya kunaka.
Wakarurama. Iko hakuna kumbove neVhidhiyo yakakosha disc mumakore gumi nemana. Munguva iyoyo, nzvimbo yese yeTV yachinja uye marongero mazhinji aungangodaro wakagadzirisa mukati memazuva eNTSC nePAL haifanire kubatwa pasina chiidzoreso. Ndokumbirawo kuti muverenge chirevo musati maodha nekuti hapana zvidzoreso zveakavhurwa madisc (mwenje wekusarura unodzoserwa). Nekudaro, zvinoita sekunge iwe ungadai usina kutora iyo Yekutanga Gwaro neakanyanya kunaka Scoot Wilkinson. Unogona kuikanda pano: https://bit.ly/14m3HKFP
Kurumidza kutumira ruzivo rwakakura
Zvinotyisa kuvhiringidza. Kuvhiringidzika kusangana kwezviyero zveyedzo pasina kwainotungamira uye kushoma kunobatsira kweamateur pasina michina yekugadzirisa. Ndingadai ndakaidzorera asi ndikapotsa nguva yakatarwa.
Ichi chaicho chakanyatso kurongedzwa kusangana kwemiyedzo ine yakaoma, asi yakarongeka menyu system. Mazhinji emapateni haashandisike nevatengi, asi mazhinji ndeevashandi kana vatengi zvakafanana. Izvi zvinotsanangurwa mune yekushora pane ino peji. Zvinotaridza sekunge iwe unogona kunge wakarasa gwaro rekurodha revashandisi (chinongedzo chiri pakadhi mukati mekesi). Iko kune zvakare zvakareruka kwazvo kutevera Yekutanga Gwaro naScott Wilkinson inosanganisirwa kurodha pasi nedisiki. Mukuenderana nemaindasitiri zviyero, hapana kudzoka kwemavhure madhisiki kunze kwekukuvara kana kuremara, saka hauna kupotsa hwindo rekudzoka. Iko hakuna kudzoka. Izvi zvinofanirwa kutarisirwa usati waodha. Zvese izvi ruzivo ruri pane ino chigadzirwa ruzivo peji. Tine urombo kana iwe wakazvishaya. Ndatenda nekuongorora kwako.
Yakanaka Kwazvo Bvunzo Disc
Inomhanya isina chaiko.
Yakakura kune amateur
Kune mumwe munhu aingotarisa kuti awane zvakanakisa kubva mumidziyo yangu, ndakanyatsoshamiswa nekunzwisisa uye nyore maitiro acho nekutenda kune hunyanzvi hweichi chigadzirwa.